Uyifumana njani ingxelo yobomi yenkampani | Ezezimali
Ngokuqinisekileyo uyazi ingxelo yobomi bomsebenzi kakuhle, okanye ukhe wabuza, ebomini bakho bonke, ezimbalwa. Nangona kunjalo, yintoni abambalwa abayaziyo kukuba ikwakhona inkampani esebenza ingxelo yobomi. Ngoku, uyifumana njani ingxelo yobomi yokusebenza kwenkampani?
Ukuba ungusomashishini okanye umnini weshishini kwaye awukaze uve oku ngaphambili, unomdla. Siza kukuxelela yintoni ingxelo esebenza ngobomi benkampani, ukuba ungayifumana njani kunye nezinye iinkcukacha ukuze ugcine engqondweni.
1 Ithini ingxelo yobomi yenkampani
1.1 Ngubani onokuyicela?
2 Ingxelo yobomi benkampani: yeyiphi idatha equlethwe yiyo
3 Uyifumana njani ingxelo yobomi yenkampani
4 Ungathini ukuba idatha onayo malunga nenkampani yakho ayifani nengxelo
Ithini ingxelo yobomi yenkampani
Ngaphambi kokufunda ukuba ungayifumana njani ingxelo yokusebenza yenkampani, kufuneka uyiqonde ingqikelelo yayo. Ngokokukhuselwa kweNtlalontle, ibhekisa kuxwebhu oluqulathe olona lwazi lubalulekileyo noluchaphazelekayo ngokubhekisele kwiinkampani zoKhuseleko lwezeNtlalontle, kodwa uhlala usuka kunyaka ophelileyo.
Le ngxelo yaqala ukuthunyelwa kwi-2018, kwaye ukuza kuthi ga ngoku ngonyaka ithunyelwa kwiinkampani abenza indawo yokuhlala ngeNkqubo yokuHlaliswa kwaBantu ngqo.
Injongo ayisiyonto ngaphandle kokunceda iinkampani ukuba zibe nolwazi olufanelekileyo malunga negalelo labo, ukongeza ekwenzeni lula uxanduva lokufaka igalelo, ukubonelela ngolwazi kunye nokubonelela ngedatha ethile ngokwemali kunye nezibalo zomsebenzi ngamnye.
Ukuba uyinkampani ebhalise abasebenzi kulo nyaka uphelileyo, ukuba ungenise iikowuteshini zekota ngeNkqubo yokuHlaliswa kwaBantu ngokuthe ngqo, uya kuba nakho ukuyicela okanye ulinde iNtlalo yoKhuseleko ukuba ikuthumele yona.
Ingxelo yobomi benkampani: yeyiphi idatha equlethwe yiyo
Njengakwingxelo yobomi bomsebenzi, kwimeko yengxelo yenkampani idatha iyafana. Ezi zahlulwe zangamacandelo amane:
Ukuchonga idatha. Olu lwazi olunalo malunga nenkampani: isizathu okanye inombolo yokuchonga irhafu, eyona Khowudi yoDweliso, iofisi ebhalisiweyo, i-imeyile kunye neekhowudi zeakhawunti yesibini.
Ukucaphula idatha. Lelona candelo libaluleke kakhulu kuba liquka yonke idatha enomdla: iindawo zokuhlala ezinikiweyo; imirhumo ebalwe yi-TGSS; iziseko zegalelo, ukuncitshiswa kunye nembuyekezo; Izinto ezihlawulwayo; imirhumo efakiweyo; ubume bemali engenayo yoKhuseleko lweNtlalo; nokumiswa kweekota.
Enye idatha evela kwiCCC ephambili. Apho naluphi na ulwazi lwenkampani lugcinwe ngokubhekisele kwiKhowudi yeAkhawunti eNkulu yeGalelo. Kwakhona apha kungabandakanya izivumelwano ezinayo inkampani kunye nenye idatha enomdla enxulumene ne-Main CCC (ukusebenzisana okanye ukusebenzisana, izivumelwano zokudibana, njl.
Ulwazi ngemizobo. Apho uyakufumana khona ukuvela kwegalelo loKhuseleko lweNtlalo; inani labasebenzi ekupheleni kwenyanga nganye kunye nohlobo lwesivumelwano sengqesho; umthamo womsebenzi ngokwesivumelwano kunye neyona yure. Kuyabonakala kakhulu kuba ikuvumela ukuba ufumane olo lwazi ngokujonga nje ibar kunye nesangqa iigrafu ekubonelela ngazo.
Zonke ezi datha kufuneka zihambelane nento onayo kwinkampani yakho. Ngapha koko, sicebisa ukuba wenze irekhodi elifana nengxelo ukuze, ekupheleni konyaka, uqiniseke ukuba idatha yoKhuseleko lwezeNtlalontle iyafana leyo uyiphatha.
Ukufikelela kwingxelo yobomi benkampani kulula kakhulu ukuyenza. Konke okudingayo kukufikelela kwiwebhusayithi yoKhuseleko lweNtlalo kwaye, xa ulapho, kwiKomkhulu le-Elektroniki loKhuseleko lweNtlalo.
Kufuneka Khangela icandelo "Izaziso ngeTelematika" kwaye, xa ucinezela, khangela "Unxibelelwano ngeTelematika".
Ingxelo kufuneka ivele kule ndawo kwaye ungayikhuphela, kodwa ikwavumela ukuba ufikelele kolunye unxibelelwano olufanelekileyo. Ukuba awunayo, unokuqhagamshelana noKhuseleko lweNtlalo ukubona ukuba kukho ingxaki kwidatha enikiweyo okanye abayifumanayo, ngakumbi ukwazi ukuba wenza izinto kakuhle kwaye awungeni engxakini.
Ngokumalunga nonxibelelwano, nje ukuba ungaphakathi kwiOfisi ye-Elektroniki ungakhangela «Iinkampani / Ukudibana kunye nokuBhaliswa / Umnxeba kunye nonxibelelwano lwe-imeyile lomqeshi ukuqinisekisa ukuba banedatha echanekileyo ukuze izaziso zikufikelele.
Ungathini ukuba idatha onayo malunga nenkampani yakho ayifani nengxelo
Kusenokwenzeka ukuba, emva kokwazi ukuba ungayifumana njani ingxelo yobomi yenkampani, kwaye uyikhuphele, idatha ekuyo ayihambelani nento onayo. Oko kukuthi, kukho ukungalingani phakathi kwabo. Ayothusi le nto ukuba yenzeke, ayiqhelekanga, kodwa kukho iimeko apho inokwenzeka khona.
Kwaye kufuneka wenze ntoni kula matyala? Okokuqala, Into yokuqala esiyibuzayo kukuba uphonononge idatha ekufuneka uyibonile ukuba akukho mpazamo yomntu Ngexesha lokulungiselela ingxelo yabucala yenkampani yakho, okanye into oyibhale gwenxa. Ukuba akunjalo, kwaye ayingqinelani nedatha yoKhuseleko lweNtlalo, kuya kufuneka ufumane naziphi na iimpazamo kwaye uqinisekise ukuba uyicubungule ngokuchanekileyo yonke ingcaciso kwiqumrhu.
Ukuba kunjalo, kuya kufuneka yenza idinga kwiKhuseleko loLuntu Ukubeka ityala kwaye babe nakho ukulungisa ulwazi abanalo kwinkampani yakho.
Kwimeko apho ibiyimpazamo yakho, kuya kufuneka wenze idinga kunye noKhuseleko lweNtlalontle ukulungelelanisa imeko yenkampani. Oko kunokuthetha ukuba bakunika isohlwayo, kodwa ukuba bayabona ukuba wenze ngokunyaniseka, akukho nto imbi inokwenzeka; Ngoku, ukuba awukwenzi kwaye bakufumanise, intlawulo ingangaphezulu kakhulu.
Ngoku ukuba uyazi okungakumbi malunga nolu xwebhu kunye nendlela yokufumana ingxelo yobomi kwinkampani, ukuba unayo, sele uyazi ukuba kufuneka wenze ntoni ukujonga ukuba idatha ichanekile kwaye, ngenxa yoko, ulawula inkampani .
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Uyifumana njani ingxelo yobomi yenkampani